Amin'ny 23 Janoary, hanazava ny olan'ny Galaxy Note 7 | Vaovao momba ny gadget
Betsaka ny zavatra voasoratra momba azy io, ary amin'izao fotoana izao dia manoratra hatrany olana izay nanery ny orinasa Koreana hanala ny Samsung Galaxy Note 7 eny an-tsena. Betsaka ny tombantombana momba izay mety ho olana nahatonga ny fipoahana an'ity terminal ity, saingy toa tsy ny bateria no nahatonga izany, satria ny terminal faharoa izay tonga teny an-tsena rehefa natombok'i Samsung ny fanoloana programa mbola nanolotra ireo olana mitovy ihany. Tamin'ny voalohan'ny volana Janoary, tamin'ny faha-2, nanambara i Samsung fa efa fantany ny anton'ireny fipoahana ireny, antony hanambarana azy amin'ny besinimaro mandritra ity volana ity.
Samsung dia nanambara tamin'ny alàlan'ny fanambarana iray fa tamin'ny 23 Janoary, hanolotra valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay hampahafantariny ny haino aman-jery rehetra, izay hampahafantatra ny mpampiasa, ny antony nipoaka ny Note 7, ny fipoahana izay nitarika ny fisintonana ny tobin'ny tsena, fisintahana izay raha ny filazan'ny ankamaroan'ny mpandinika dia tsy nahazo nify tao tombotsoan'ny orinasa tamin'ny taona lasa.
Hanolotra horonantsary manazava ho an'ireo mpampiasa liana rehetra, ary koa ny media ny orinasa afaka matoky momba ny fiarovana ny terminal an'ny orinasa ity, mampahafantatra na dia ny tsipiriany kely indrindra momba ny niandohan'ny olana aza. Amin'izao fotoana izao, ny famolavolana ny terminal dia ny vato rehetra no mahatonga ny olana. Matetika izany dia mitranga rehefa ny departemanta marketing an'ny. ny orinasa iray no tompon'andraikitra amin'ny famolavolana ny telefaona fa tsy ny injeniera, izay mahalala tsara izay mety sy tsy azo atao ao anaty terminal, raha miresaka telephony finday isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Amin'ny 23 Janoary, hanazava ny olan'ny Galaxy Note 7 i Samsung
Ireo no vaovao rehetra tamin'ny fanavaozana ny Snapchat farany